Shandisa, Tengesa, uye Taurirana neFormstack Launch Pad | Martech Zone
Chimwe chezvinhu zvinotonhorera nezvekuva wekushambadzira agency uye kumhanya Martech Zone ndeyekuti isu tinosvika pakushandisa zvishandiso zvevatengi vedu nemasayiti edu uye edu evatengi masosi. Formstack vanga vari shamwari kubvira pavakatanga… chaizvo vasati vatangwa. Ndakave nemufaro wekushanda nemumwe wevavambi makore gumi apfuura uye ndakada kumuona achisvetuka ngarava kubva kuchinyakare midhiya uye kutanga Formstack.
Formstack ikozvino yakura kusvika pamusoro pevashandisi zviuru zana! Uye isu tinodada zvisingaite kuva navo semubatsiri weMartech.
Kune mamwe mafomu anovaka kunze uko uye kune mafomu anovaka ayo anochengeterwa kune chaiwo mapuratifomu. Formstack yakaveza chikamu chakakura chemusika nekuti ivo zvechokwadi mutengesi uye chikuva agnostic. Imwe yekiyi dzinozivikanwa kiyi ku Formstack Kubudirira, zvakadaro, ndekwekuti ivo vakaita basa risinganzwisisike pakuvaka kusangana kwakaburitswa nemamwe mapuratifomu. Chinyorwa chinoshamisa… uye ikozvino Formstack ine beta yakaburitsa imwe chikuva inonzi Tanga Pad.
YeFormstack nyowani Yekutanga Pad ipuratifomu yakasanganiswa yemafomu epamhepo, mapeji ewebhu, zvitoro zvee-commerce, uye maturusi emaimeri ekushambadzira, akagadzirirwa kutora bhizinesi rako diki padanho rinotevera. Iyo hubhu hweakareruka webhu maapplication ayo anozoita kumhanya bhizinesi rako rive nyore kwazvo. Heino yakanaka mushandisi nyaya iyo Formstack yakagadzira kutsanangura Launch Pad:
Oliver muridzi wechitoro chemuno uye anofarira Formstack mushandisi achitarisa kuwedzera bhizinesi rake diki 'kuvepo pamhepo. Tevera nyaya yemashandisiro aaiita Formstack Launch Pad kutora bhizinesi rake padanho rinotevera.
Shandisa - Oliver akashandisa iyo Peji chishandiso kukurumidza kugadzira iyo yepakati webhu kuvapo uko vashanyi vanogona kuwana ruzivo nezve bhizinesi rake uye chinongedzo kune yake chaiyo chitoro. Oliver akakwanisa kugadzirisa peji rake kuti rienzane nemavara uye manzwiro echiratidzo chake.
tengesa - Kubva pane peji raOliver, vatengi vanogona kuwana yake yese chigadzirwa vachipa kuburikidza neZvitoro chishandiso. Achishandisa chishandiso ichi, Oliver akamisa mapeji ega ega kune chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvake, achibvumira vashandisi kuti vatarise uye nekuisa maodha mune snap.
Kurukura - Mushure mekuunganidza kero dzevatengi dzeemail, Oliver aida kuvaudza nezvekutengesa mune ramangwana uye zviitiko Akashandisa iyo Yekutanga Pad kuti akurumidze kugadzira macomputer eemail akasimbisa zvinhu izvi, achikurudzira vateveri vake vatsva kuti vadzokere kuchitoro, muchitoro kana online
ne Formstack 's Launch Pad, iwe unokwanisa kukamba-kutanga (kana kuwedzera) ako ekushambadzira kuyedza mune imwe yepakati chikuva. Zviri nyore kubata, zvinotora nguva shoma kuti utange, uye kupfuura zvese, zvinokutendera kuti udzokere pane zvaunoda kunge uchiita. Tanga muedzo wepachena weLaunch Pad nhasi… iko kunyoreswa kwenyanzvi kuri chete $ 29 pamwedzi!
Tags: bata dataunganidza datadata kutoraformstacksanganisira ecommercekuvhura pad